UHD nitari-dàlana, Famaritana LED lehibe famaritana, Joron'ny efijery kely Led Led Manufacturers sy mpanamboatra any Sina
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:UHD nitarika Screen, Famaritana dikanteny LED lehibe famaritana, Led Screen efijery kely,,,
Home > Products > UHD Led Screen > Pikantsary Led Pixel Pitch kely - PV Series
Ny vokatra avy amin'ny Pikantsary Led Pixel Pitch kely - PV Series , mpanofana manokana avy any Shina, UHD nitarika Screen , Famaritana dikanteny LED lehibe famaritana mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Led Screen efijery kely R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Shina Pikantsary Led Pixel Pitch kely - PV Series mpamatsy
Mba hahafahana mamaly ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny efijery LED UHD , ny PRIVA LED dia namolavola ny vahaolana feno avy amin'ny Module, karatra HUB ary kabinetra ambony.
Ny andiany PV an'ny PRIVA LED amin'ny efijery nitarika UHD dia manana fiasa:
Kabinetra 1,600mmx 337.5mm izay mora ahazoana 16: 9 Ratio amin'ny tontonana efijery LED
2, Fametrahana mialoha & fikojakojana mialoha. Modules, karatra Hub, famatsiana herinaratra ary karatra fandraisana dia afaka manaisotra ny sisiny sy apetraka avy eo aloha.
3, PU andiany an'ny PRIVA LED dia manana safidy ho an'ny Redundancy Power. Raha voafehy ny famatsiana herinaratra iray dia hanohy miasa tsy misy olana ny iray hafa.
4, seranan-tsindry famantarana
5, Modules Smart miaraka amin'ny angon-drakitra calibration. Ho voatahiry ao amin'ny module ny angon-drakitra momba ny calibration, ka rehefa asiana mody dia havaozina ho azy ny angon-drakitra.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny efijery fampisehoana LED UHD isika, dia aza misalasala mifandray aminay!
UHD nitarika Screen
Famaritana dikanteny LED lehibe famaritana